TS Ntụgharị Mac - tọghata TS Easily na ngwa ngwa (Mavericks gụnyere)
> Resource> Mac> Get TS Ntụgharị maka Mac iji tọghata TS na Mac OS X (El Capitan gụnyere)
Na-enweta ụfọdụ ihe ọmụma bụ isi nke TS video Ọkpụkpọ na ịmụta otú tọghata TS na Mac na a ọkachamara TS Ntụgharị maka Mac.
1. Gịnị bụ a TS faịlụ?
Transport iyi (.TS) bụ a nkwukọrịta protocol maka audio, video, na data. Ọ bụ ụdị nke dijitalụ akpa format na encapsulates packetized elementrị iyi na ndị ọzọ na data. TS na-akọwapụtaghị ya MPEG-2 Part 1, Systems (ISO / IEC ọkọlọtọ 13818-1). Ọ na-amara dị ka Itu-T rec. H.222.0. Ya imewe mgbaru ọsọ bụ na-ekwe ka multiplexing nke dijitalụ video na ọdịyo na mekọrịta mmepụta. Transport iyi awade atụmatụ maka njehie mgbazi maka njem n'elu unreliable mgbasa ozi, na-eji na agbasa ozi n'ikuku ngwa dị ka DVB na ATSC.
2. Olee otú igwu egwu TS faịlụ na Mac maka free?
Olee otú igwu egwu TS na snow agụ owuru, ma ọ bụ OS X ọdụm? TS faịlụ na-Naa sara mbara nke ukwuu na-agbasa na Internet dị ka (na-emekarị gbawara n'etiti) E si HDTV mgbasaozi. Dị ka ihe MPEG format, e nwere a dịgasị iche iche nke egwuregwu na ụzọ na-egwu azụ TS faịlụ ma ọ bụ iji tọghata ha ka ha ọzọ mkpesa MPEG-2 faịlụ maka authoring dị ka DVD / HD DVD. Ụzọ kasị mma na-egwu TS faịlụ bụ ibudata na wụnye VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ. The VLC ngwugwu ama agụnye software na-egwu MPEG-2 video ọdịnaya ma na-akwado mmeghe ma na-akpọ TS faịlụ ozugbo. Ọzọkwa, Mplayer OS X bụ ezigbo ikpo okwu maka niile Mac ọrụ na-egwu ọtụtụ dị iche iche video faịlụ dị ka TS, TP.
3. TS Ntụgharị maka Mac
Free download TS Ntụgharị maka Mac:
Tọghata TS ka MOV, MP4, AVI, MKV, M4V wdg na Mac
Iji mbubata video faịlụ ka iMovie maka inwekwu nchịkọta akụkọ, ma ọ bụ chọrọ igwu dị iche iche video faịlụ na obere ọkpụkpọ, ọ dị mkpa iji tọghata video faịlụ ka adabara formats. Mac TS Ntụgharị nwere ike ime ezi ọrụ maka ndị chọrọ iji tọghata TS video faịlụ ka na-ewu ewu formats dị ka AVI, FLV, WMV, 3GP, 3GP2, 3GPP, 3GPP2, QuickTime (MOV), mpg, MKV, wdg Mgbe akakabarede, ọ dị mfe na-etinye videos n'ime iMovie enweghị ihe ọ bụla nsogbu. Ihe bụ ihe ọzọ, anyị nwere ike na-etinye video n'ime egwuregwu dị ka iPod, iPhone, Apple TV, PSP, Zune, PDA / n'akpa uwe PC (gụnyere Blackberry), Creative Zen, Archos, Epson media Player na ihe ọ bụla na ekwentị.
Wepụ audio si TS video on Mac
TS Ntụgharị maka Mac bụ ezi omume na-wepụ audio si TS videos na naanị ole na ole clicks, Ke adianade do, uku a ngwa nwere ike na-akwado anyị iji tọghata ọdịyo faịlụ formats ka MP3, M4A, WAV, AC3, AAC, MKA, OGG, wdg on Mac.
Ewepụtụ, akuku, tinye mmetụta TS video on Mac
N'ihi na ọtụtụ ugboro, anyị nwere mmasị dezie video tupu anyị ịkọrọ ya enyi anyị ma ọ bụ ndị ikwu, ebe ọ bụ na anyị chọrọ inye arụpụta ihe kasị mma ha. TS Ntụgharị Mac bụ oké usoro ihe omume anyị ka anyị dezie TS video faịlụ. Anyị nwere ike ewepụtụ video iji na-enweta mmasị na obere vidiyo site na-ahọpụta mmalite oge na njedebe oge. Ihe bụ ihe ọzọ, anyị na-enwe ike ubi na video wepụ nwa mmanya, na-eme ka video iche n'ebe ndị ọzọ site n'isetịpụ ya nchapụta na saturation.